Modal verb "Can't" နဲ့တွဲတဲ့ idiomatic expressions လေးတွေအကြောင်း - Myanmar Network
Modal verb "Can't" နဲ့တွဲတဲ့ idiomatic expressions လေးတွေအကြောင်း
Posted by Language Republic on February 13, 2015 at 17:41 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ စကားလုံးတွေ သိရုံ၊ သဒ္ဒါ မှန်ကန်ရုံ၊ အသံထွက် မှန်ရုံလောက်နဲ့ ပြောနိုင်တယ် ဆိုရင်ဘဲအတော် ဟုတ်နေပြီလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သဘာဝကျကျ ပြောဖို့ရယ်၊ စကားကို အလှပြင်ဆင် ပြောတတ်ဖို့ရယ် ကတော့ native speaker တွေ ပြောပုံကို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် native speaker တွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ်ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားက သဘာဝကျကျ ပြောမှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့ can’t ဆိုတဲ့ modal verb နဲ့ဆိုင်တဲ့ idiom ၁၀ မျိုးကို စကားပြောရာမှာ တန်ဆာဆင်ဖို့ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး “can” အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာ “can” နှင့်သူ့ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် “can’t” သို့မဟုတ် “cannot” (စာလုံးပေါင်းသတိပြုပါ။ can not လို့ ခွဲမပေါင်းရဘူးနော်။) ဟာ တစ်ခုခုကို “လုပ်နိုင်တယ်” “နိုင်စွမ်းသည်” ဆိုတဲ့ ability ရှိခြင်း/ မရှိခြင်း တို့ကိုဖေါ်ပြပါတယ်။
I can play tennis. (တင်းနစ်ကစားတတ်တယ်။)
I cannot swim. (ရေမကူးတတ်ဘူး။)
မေးခွန်းပုံစံနဲ့ သုံးရင် ခွင့်တောင်းတာရယ်၊ သို့မဟုတ် စိန်ခေါ်တာရယ် စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့ သုံးရပါတယ်။
“Can I leave early today?” - ဒီကနေ့ စောစော ပြန်ပါရစေ။(ခွင့်တောင်း)
“Why can’t I have another biscuit?” - နောက်တစ်ခုဘာကြောင့် ထပ်စားလို့ မရတာလဲ။ (စိန်ခေါ်)
(မှတ်ချက်။ ။ စိန်ခေါ်တယ်ဆိုတိုင်း ရန်တွေ့ဖို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အမေးခံရသူ ဆီက အကျိုးအကြောင်း ဖြေရှင်းချက်ကို တောင်းချင်လိုိ့ သုံးတာနော်။)
ကဲအခု native speakers တွေ ရဲ့ စကားပြောတွေမှာ အများဆုံးသုံးတဲ့ can’t နဲ့ ဆိုင်တဲ့ idiom ၁၀ မျိုးကို လေ့လာလိုက်ရအောင်။
၁။ can't wait… - တစ်ခုခုအတွက် အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ (ပျော်လို့ပေါ့)
I can't wait to see my friends next week. It's going to be wonderful.
၂။ can't stand…- သည်းခံလို့ မရဘူး။ သည်းမခံနိုင်ဘူး။ (အရမ်းမုန်းတာ/ မကြိုက်တာ)
I can't stand the traffic in Yangon.
၃။ can't bear…- သည်းမခံနိုင်ဘူး။ (ဒီမှာဆိုလိုတာကမပျော်ရွှင်လို့ပါ။)
She can't bear to be away from her family longer thanaweek.
၄။ can't take it..- ဆက်သည်းမခံနိုင်ဘူး။ (ဒီမှာကတော့ စိတ်ညစ်စရာ/ မခံချင်စရာဆက်တိုက် ဖြစ်လာလို့)
I can't take his constant shouting any more. I have to leave.
၅။ can't be bothered…- ဂရုမစိုက်ဘူး။ စိတ်မဝင်စားဘူး။
I know I should go forarun but I can't be bothered tonight.
၆။ can't take my eyes off him/ her… - တမ်းတမ်းစွဲ ဖြစ်နေပြီ။ (မျက်စိကျနေပြီပေါ့။)
Simon can't seem to take his eyes off the new Marketing Assistant.
ရ။ can't win…- ဘဝကခက်ခဲပါတယ်။
Sometimes no matter what you do in your life, you can't win.
၈။ can't help it…- မတတ်နိုင်ဘူး။ (အောင့်မထားနိုင်ဘူး၊၊ မလုပ်ဘဲမနေနိုင်ဘူး)
I can't help it. I find chocolate digestives irresistible.
၉။ can't think straight…- အာရုံစိုက်လို့ မရဘူး။
I am so tired that I can't think straight.
၁၀။ can't hear myself think…- အာရုံစိုက်လို့ မရဘူး။
There is so much noise here that I can't hear myself think.
ကဲ.. ဒါတွေကတော့ အလွတ်ကျက်မှတ် လေ့ကျင့်ပြီးလက်တွေ့ conversation တွေမှာသုံးလို့ရတဲ့ idiom တွေပါဘဲ။ နောက်ထပ်လည်း can’t နဲ့ ဆိုင်တဲ့ idiom တွေလည်းရှိဦးမှာသေချာပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့လည်း ကိုယ်လေ့လာထားတာတွေ ရှိရင်လည်း note book ထဲ ရေးမှတ်ရုံ မဟုတ်ဘဲ လေ့ကျင့် ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Englishwithatwist.com မှ Shanti ရဲ့ "10 Idiomatic Expressions with the modal verb 'can’t'" ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းဆောင်းပါးကို ဒီ link (http://englishwithatwist.com/2014/01/10/10-idiomatic-expressions-wi...) တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျား (သုတရသ ဆောင်းပါး)
အင်ျဂလိပျစကားပွောတဲ့အခါ စကားလုံးတှေ သိရုံ၊ သဒ်ဒါ မှနျကနျရုံ၊ အသံထှကျ မှနျရုံလောကျနဲ့ ပွောနိုငျတယျ ဆိုရငျဘဲအတျော ဟုတျနပွေီလို့ ပွောလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သဘာဝကကြ ပွောဖို့ရယျ၊ စကားကို အလှပွငျဆငျ ပွောတတျဖို့ရယျ ကတော့ native speaker တှေ ပွောပုံကို လလေ့ာပွီး လကေ့ငျြ့ရပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ native speaker တှနေဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါ ကိုယျပွောတဲ့ အင်ျဂလိပျစကားက သဘာဝကကြ ပွောမှ အဆငျပွမှော ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနတေ့ော့ can’t ဆိုတဲ့ modal verb နဲ့ဆိုငျတဲ့ idiom ၁၀ မြိုးကို စကားပွောရာမှာ တနျဆာဆငျဖို့ ဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
ပထမဆုံး “can” အကွောငျးနညျးနညျးပွောခငျြပါတယျ။ အင်ျဂလိပျမှာ “can” နှငျ့သူ့ရဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျ “can’t” သို့မဟုတျ “cannot” (စာလုံးပေါငျးသတိပွုပါ။ can not လို့ ခှဲမပေါငျးရဘူးနျော။) ဟာ တဈခုခုကို “လုပျနိုငျတယျ” “နိုငျစှမျးသညျ” ဆိုတဲ့ ability ရှိခွငျး/ မရှိခွငျး တို့ကိုဖျေါပွပါတယျ။
I can play tennis. (တငျးနဈကစားတတျတယျ။)
I cannot swim. (ရမေကူးတတျဘူး။)
မေးခှနျးပုံစံနဲ့ သုံးရငျ ခှငျ့တောငျးတာရယျ၊ သို့မဟုတျ စိနျချေါတာရယျ စတဲ့ အဓိပ်ပါယျတှနေဲ့ သုံးရပါတယျ။
“Can I leave early today?” - ဒီကနေ့ စောစော ပွနျပါရစေ။(ခှငျ့တောငျး)
“Why can’t I have another biscuit?” - နောကျတဈခုဘာကွောငျ့ ထပျစားလို့ မရတာလဲ။ (စိနျချေါ)
(မှတျခကျြ။ ။ စိနျချေါတယျဆိုတိုငျး ရနျတှဖေို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အမေးခံရသူ ဆီက အကြိုးအကွောငျး ဖွရှေငျးခကျြကို တောငျးခငျြလို့ သုံးတာနျော။)
ကဲအခု native speakers တှေ ရဲ့ စကားပွောတှမှော အမြားဆုံးသုံးတဲ့ can’t နဲ့ ဆိုငျတဲ့ idiom ၁၀ မြိုးကို လလေ့ာလိုကျရအောငျ။
၁။ can't wait… - တဈခုခုအတှကျ အရမျးစိတျလှုပျရှားနတေယျ။ (ပြျောလို့ပေါ့)
၂။ can't stand…- သညျးခံလို့ မရဘူး။ သညျးမခံနိုငျဘူး။ (အရမျးမုနျးတာ/ မကွိုကျတာ)
၃။ can't bear…- သညျးမခံနိုငျဘူး။ (ဒီမှာဆိုလိုတာကမပြျောရှငျလို့ပါ။)
၄။ can't take it..- ဆကျသညျးမခံနိုငျဘူး။ (ဒီမှာကတော့ စိတျညဈစရာ/ မခံခငျြစရာဆကျတိုကျ ဖွဈလာလို့)
၅။ can't be bothered…- ဂရုမစိုကျဘူး။ စိတျမဝငျစားဘူး။
၆။ can't take my eyes off him/ her… - တမျးတမျးစှဲ ဖွဈနပွေီ။ (မကျြစိကနြပွေီပေါ့။)
ရ။ can't win…- ဘဝကခကျခဲပါတယျ။
၈။ can't help it…- မတတျနိုငျဘူး။ (အောငျ့မထားနိုငျဘူး၊၊ မလုပျဘဲမနနေိုငျဘူး)
၉။ can't think straight…- အာရုံစိုကျလို့ မရဘူး။
၁၀။ can't hear myself think…- အာရုံစိုကျလို့ မရဘူး။
ကဲ.. ဒါတှကေတော့ အလှတျကကျြမှတျ လကေ့ငျြ့ပွီးလကျတှေ့ conversation တှမှောသုံးလို့ရတဲ့ idiom တှပေါဘဲ။ နောကျထပျလညျး can’t နဲ့ ဆိုငျတဲ့ idiom တှလေညျးရှိဦးမှာသခြောပါတယျ။ စာဖတျသူတို့လညျး ကိုယျလလေ့ာထားတာတှေ ရှိရငျလညျး note book ထဲ ရေးမှတျရုံ မဟုတျဘဲ လကေ့ငျြ့ ကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
Englishwithatwist.com မှ Shanti ရဲ့ "10 Idiomatic Expressions with the modal verb 'can’t'" ကို ကိုးကားဘာသာပွနျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
မူရငျးဆောငျးပါးကို ဒီ link (http://englishwithatwist.com/2014/01/10/10-idiomatic-expressions-wi...) တှငျ သှားရောကျဖတျရှုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by K Lwin on February 14, 2015 at 22:44
Thanksamillion for posting the above. I've just learnt it before going to sleep. Wishing you havealot of merit. :)
Permalink Reply by Aung Soe Oo on February 25, 2015 at 10:44
Permalink Reply by Cho Cho Nwe on June 20, 2015 at 21:43
Permalink Reply by Nyi Lwin on July 23, 2015 at 8:45
Permalink Reply by nyeinthetko on September 6, 2015 at 15:53
Permalink Reply by Phyo Ei Hlaing on September 7, 2015 at 13:46
So effective post for all learners.Thanks.
Permalink Reply by Daw PeTi on September 7, 2015 at 15:54
Permalink Reply by Htin Lin Aung on September 7, 2015 at 17:07
Permalink Reply by Maymi Kolin on September 7, 2015 at 17:10
Permalink Reply by Aquarius Prince on September 7, 2015 at 20:04
Permalink Reply by Kyaw Zin Oo on September 7, 2015 at 23:21
I really thank I try .
Permalink Reply by Leo Linn on September 14, 2015 at 7:09